रिटिनोइड्स को एक समूह: ड्रग्स। Retinoids: यो के हो?
सबैभन्दा साधारण कस्मेटिक समस्याहरूमध्ये, मुँहासे प्रमुख स्थानहरूमा हिउँदछन्। तिनीहरू उमेरमा परेका हुन्छन्। जवान मानिसहरू मा, तिनीहरू अगुवाको प्रतिक्रियाको रूपमा देखा पर्छन्। तर कुनै पनि वयस्क व्यक्तिले बलियो भावनाहरू, ओभरटाइप वा छाला समस्याको साथ पिमप्लेट गर्दछ। यहाँ पनि यो जरूरी छ कि शस्त्रागार को विरुद्ध संघर्ष मा केहि पसंदीदा साधन शस्त्रागार मा। भर्खरै, तपाईं प्रायः रिटिनोड ड्रग्स र उनीहरूको प्रभावकारीताबारे सुन्न सक्नुहुन्छ।
यो सुन्दर हुन राम्रो हुनेछ, तर यो सधैं बन्द हुँदैन। भन्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण मिति वा एक व्यापारिक बैठकमा जानुहोस्, जहाँ तपाइँ परेडमा हुनु आवश्यक छ, र यहाँ माउन्ट जलाइएको एउटा फोहर तारा। ठीक छ, म के गर्नु पर्छ? निस्सन्देह, लड्न, र प्रभावकारी तरिका संग! उनीहरूलाई, अफवाह रेटिनाइड ड्रग्सलाई बुझाउँछ। यदि तपाइँ डाक्टरसँग परामर्श गर्नुहुन्छ भने, उनी रिटिनोल एसीटेटको प्रयोग गर्न वा रिटिनोल पलाइटेट को सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ । यी औषधीहरू र रिटिनोइडहरू हुन्छन्, जुन वास्तवमा भिटामिन ए को एनालॉग हुन्छन्। अन्यथा यसलाई रेटिनोल भनिन्छ। शरीरमा, यो पदार्थ स्वतन्त्र रूपमा बीटा कोरोननबाट खाना आउँछ जुन संश्लेषित हुन्छ। यदि beta-carotene पशु मूलको हो भने, त्यसपछि पदार्थहरू retinoids भनिन्छ। रोपण मूलसँग, यो carotenoids हुन्।
भिटामिन ए को महत्व
हाम्रो शरीरमा महत्वपूर्ण प्रक्रियाहरू, भिटामिन ए भागमा लिन्छ। तदनुसार, यसको कमीले कोशिकाको पुनरुत्थान, हड्डियों, नाखून र दाँत, मस्तिष्कको काम, भिजुअल अङ्गहरू, साथै छाला र म्यूकोसाको अवस्थालाई प्रतिकूल पार्दछ। तर कठिनाई भनेको ठूलो संख्यामा व्यक्तिले अरूलाई आश्वासन दिन्छ कि भिटामिन लिनु शरीरमा हानि ल्याउन सक्दैन, र यसैले रेटिनोइड्समा अनियन्त्रित तयारी लिन सक्छ। तर अवस्था पूर्णतया फरक छ, विशेषगरि यदि हामी सिंथेटिक मूल को रेटिनोल को अर्थ हो।
त्वचा विज्ञान मा
त्वचा विशेषज्ञहरूले रेटिनाइड ड्रगहरू असाधारण अवस्थाहरूमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्, जब सबै माध्यमहरू प्रयास गरिन्छ, र मुँहासे पारित भएको छैन। यस अवस्थामा, विभिन्न खुराक फारमहरू निर्धारित गर्न सकिन्छ: मौखिक प्रशासनको लागि, अट्रामुसेलुलर इंजेक्शनको रूपमा, क्यान्सर वा बाह्य प्रयोगको लागि तयारी। दुर्लभ अवस्थामा, एक विशेषज्ञले रिकोनोइड्स को एक दुई ड्रपमा नमिस्क्राइजिंग क्रीम थप्ने सुझाव दिन्छ। केहि रिटिनोइड ड्रग्स फार्मेसीमा खरिद गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, रिटिनोल एसीटेट वा रिटिनोल पलाइट्रेट। स्थिरता अनुसार, यी पदार्थ तेल तरल पदार्थ हुन्। यी दुई ड्रगहरू धेरै फरक छन्। मानव शरीरमा पहिलो पहिलो समावेश छैन र, वास्तवमा, एसिटिक एसिडको नमक हो। र दोस्रो एक भौतिकीय संतृप्त एसिड हो, जुन, अपघटन पछि, असंतृप्त एसिड मा परिवर्तन, जीव को जीवन को लागि आवश्यक छ।
कसलाई अप्ठ्यारो पर्छ?
यदि मुँहासे रिकोनोइड्स को उपचार को लागि एक ड्रग को रूप मा प्रयोग गरिन्छ, त तपाईंलाई खाता र मौजूदा contraindications लेने को आवश्यकता हो। उदाहरणका लागि, गर्भवती र लापरवाही गर्ने महिलाहरू, साथै संवेदनशील छाला भएका व्यक्तिहरू, लिभर र एलर्जीहरू, यस्ता प्रकारका औषधिहरू लिनु हुँदैन। साथै, प्रायजसो धूम्रपान र मान्छे पिउने जोखिम नगर्नुहोस्। विशेष गरी जवान गर्भवती महिलाहरु हुनु पर्छ, किनकी मुँहासे को लागि रिटिनोइड्स यस औषधि हुन् जुन यस समयमा अस्वीकार्य छैन। उनीहरूले भ्रूणमा विकासका दोषहरू गर्न सक्छन्।
लागूपदार्थहरूको साइड इफेक्ट
यसलाई लिनु अघि, तपाइँलाई थाहा छ कि यस्तो उपकरणमा रेटिनोलको दैनिक आदर्श 20 पटक समावेश छ। यस्तो ओभरडोज सुरक्षित हुन सक्दैन। प्रशंसापत्रले यो तथ्य पुष्टि गर्छ कि रेटिनोइड लिने नकारात्मक नतिजाहरूको कारण हुन्छ। यो भ्रूणको दोष हो, यदि औषधि भविष्य मातृ द्वारा लिया जान्छ, एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया, यदि स्वागत गरिन्छ सक्रिय सूर्य को समयमा। थोरै कम गम्भीर समस्याहरू, तर अझै पनि अप्रिय, एक बलियो छालाको पहेलो, लाडोपन र छालाको छाला। छाला सुक्खा हुन सक्छ। कपाल हानि र तीब्रहरू कहिलेकाहीँ हेरिएको हुन्छ। आत्म-उपचार रिटिनोडहरू त्याग्न सम्भवतः, पर्याप्त तर्कहरू दिइएको छ। धेरै डाक्टरहरूले उनीहरूलाई सबै सिफारिस गर्दैनन्, कि उनीहरूले राम्रोसँग राम्रो हुन्छ जब तिनीहरू शरीरमा शरीर प्रवेश गर्छन्।
रेटिनोइड्स कसरी उपचार गर्छन?
सबैभन्दा प्रभावकारी मुँहासे रिटानोइड्सको उपचार हो। यस प्रकारको तयारीहरूले किकुलर एपिथियमियमको किटिनिनलाइजेसन प्रक्रियालाई सामान्यतया र सूजन कम गर्दछ। उदाहरणको रूपमा, हामी "Adapalen" उल्लेख गर्न सक्छौं, जुन रिटिनोइनिक एसिडको सिंथेटिक एनालॉग हो र न केवल एक क्रीम जस्तै, तर जेलको रूपमा पनि उत्पादन गरिन्छ। "Adapalen" comedones को गठन रोक्छ र अवस्थित व्यक्तिहरुलाई हटाउँदछ। भ्रामक प्रक्रिया को केन्द्र मा लेक्कोसाइट को माइग्रेशन को रोकथाम गरेर, एक विरोधी भड़काऊ प्रभाव प्राप्त हुन्छ। हरेक दिन बिस्तरमा जानअघि प्रभावित छालामा लागू औषधि लागू गर्नुहोस्, हड्डी र आँखाको क्षेत्रबाट जोगिन। प्रभाव उपचार को महिना वा दुई पछि पछि प्रभावकारी छ। एक निरन्तर सुधार तीन महिनाको पाठ्यक्रम पछि प्रकट हुन्छ। सामरिक retinoids को pimples को बीच, सूखी छाला, mucosa जलन छ। सूर्यमा, छाला जलन हुन सक्छ, किनकि रिटिनोइड्सको यो समूहले छालाको पिसाब गर्दैछ।
यसको अतिरिक्त, रिटिनोइड्सले टेटिनिनो, इस्ट्रेटिनिनो, एट्रेटिनरेट, एसिट्रेटिन, टेस्टोटिन र टर्मोटोन समावेश गर्दछ। सामरिक रूपमा, अन्य शब्दहरूमा - बाह्य अर्थहरू समावेश गर्दछ "एपिजेल", "क्लासेनिट", "डिस्पिन", "इजोट्रेक्सिन", रेटिनोभुयू मल, "एडकलिन" र "रेडविट।" कैप्सुल एनालॉगहरूमा "रोकोक्टेन", "एसिनेट्टन", "एविट" र "टिगिसन" समावेश गर्दछ।
त्यहाँ चार ठूलो समूहहरू छन् वा मुँहासे, झिल्लीहरू, बुढो र चिसोपनको नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ retinoids को पीडित।
पहिलो पुस्ताले रिटिनोल र यसको एथेरहरू समावेश गर्दछ। यो मुँहासे विरुद्ध लडाइँमा सबैभन्दा प्रभावशाली छ, रेटिनोइड्सको एक समूह। दबाइहरु रेटिनोल एसीटेट, रिटिनोल पलाइटेट, रेटिनल, टेटिनिनो र अरू हुन्।
दोस्रो पीढीले psoriasis र dermatoses को उपचार को लागि प्रणालीगत ड्रगहरू समाविष्ट गर्दछ। यी एट्रेट्रेट र एसिटिटिन जस्ता औषधीहरू छन्। फार्मेसियों मा, उनि नाम "Tigazon" र "Neotigazon।" को अंतर्गत मिलयो।
तेस्रो पीढीमा, रिटिनोइड्स एन्कोलोजी अभ्यासमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू polyaromatic यौगिकहरू (आर्थोटोइड्स) द्वारा प्रतिनिधित्व हुन्छन्।
रिटिनोइड्सको चौथो पीढीले हालै संश्लेषित प्रजातन्त्रको प्रजाति समावेश गर्यो। यी "टोजोटोटन" र "बक्सारोटन" हुन्। पूर्व विशेष रूप देखि जेल को रूप मा प्रयोग गरिन्छ र प्रभावी ढंग देखि psoriasis को उपचार गर्दछ।
छालामा रिटिनोलको कार्य
स्थानीय रिटिनोइडहरू सामरिक तयारीहरू हुन् जुन शरीरको छालामा सकारात्मक असर छ। यसैले संभव पोबच्की कम से कम हुन्छ, जस्तै कि यस प्रकार को "ओवरडोज" मा पुगन को रूप मा यो असंभव छ। यस्ता ड्रगहरूसँग ब्ल्याकहेडको उपचार धेरै चोटि सुरक्षित छ। मुँहासेको बाह्य उपचारको लागि, प्राकृतिक र सिंथेटिक रेटिनोडहरू प्रयोग गरिन्छ। प्राकृतिक रूपमा रेटिनाइक एसिडको आइओमर्सहरू - "इस्ट्रेटिनिनोइन" र "ट्रेटिइनइन"। उत्तिकै विदेशमा प्रयोग गरिन्छ र रूसमा प्रयोग गरिएको छैन, किनभने यसले छालाको छाला जलन उत्पन्न गर्दछ। सिंथेटिक ड्रगहरू पहिले नै उल्लेख गरिएको "एडपालेन" र "टजारोटन" समावेश गर्दछ।
वैज्ञानिकों ले साबित गरेको छ कि रेटिनोल, वा भिटामिन ए, छाला पुनरुत्थान को बढ़ावा देती छ, मुक्त कणहरु को प्रभाव लाई बेवास्ता गर्दछ। यसको अतिरिक्त, यसले सबै कक्षहरूलाई फेरि पुरानो र बिरामी समेत पुनर्जीवित गर्न उत्प्रेरित गर्छ। भिटामिन ए कोलागेन र एल्स्टिन को कृत्रिम संश्लेषण को कारण झुर्रियों देखि छाला को रक्षा गर्दछ। Retinoids को नियमित उपयोग संग, फोटोिंग को जोखिम को सफाया गरियो र epidermis को माथिल्लो तह नवीकरण गरिएको छ।
रेटिनोलको साथ क्रीम छनौट गर्न , तपाइँ एकाग्रतामा ध्यान दिन आवश्यक छ। रेटिनोल यसको सारमा सजिलो हुन्छ, र यसको संरक्षण बिना यो नष्ट हुन्छ। यसकारण, यो क्याप्सुलमा "लुकेको" हो, जुन आवेदन गर्नु अघि खोलिनु पर्छ।
सूजन र जलन को लागी छाला को लागी, जेल को रूप मा ड्रग को लागी अधिक उपयुक्त छ।
मिथकहरू र सत्यहरू
निष्कर्षमा पुग्दा, म यो नोट गर्न चाहन्छु कि रिटानोइड्स धेरै अस्थिर छन्। तैयारी, जसको नामहरु घोषित गरियो, पहिले देखि नै राम्रो साबित भयो र उनको प्रभावशीलता साबित भयो, तर धेरै अन्य प्रत्येक व्यक्ति को अलग मा व्यवहार गर्दछ। त्यसोभए, विश्वासको साथमा कि रिटिनोइड ड्रगहरू तपाईले मद्दत गर्नुहुनेछ, तपाइँ सक्नुहुन्न।
एकै समयमा तपाईंलाई रिकोनोइडको बारेमा अन्य मिथकहरू हटाउन आवश्यक छ। उदाहरणको लागि, प्रभावकारी आवेदनको लागि छाला नमी मुख्य हालत होइन। बाहिरी भन्दा औषधि लागू गर्न सिफारिशहरूको बावजूद, यो दिनको समय पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर पछि छाला रेटिनोलको आदी हो। सुरक्षाको लागि, यो सनस्क्रीन लागू गर्न राम्रो छ। अर्को मिथक भन्छन् कि आँखा वरिपरि छाला उनीहरूको अनुप्रयोगको लागि एक निषिद्ध क्षेत्र हो। यो एकदम सही छैन, यद्यपि छाला यहाँ साँच्चै सबैभन्दा नाजुक छ। यदि तपाइँ यस साइटलाई सावधानीपूर्वक प्रशोधन गर्नुहुन्छ भने, कुनै पनि समस्याले पछ्याउने छैन। स्वाभाविक रूप देखि, तपाईंलाई पिक्सेल को नजदीक जाना र आफ्नो होंठ को छाला को उपचार नगर्ने को आवश्यकता छैन।
नतीजा यो हो: रिटोनोइड्स भएका धनहरू तपाईले अनुप्रयोगको सबै सावधान र प्रविधीलाई हेर्दा पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी छालाका लक्षणहरू मेटाउनुभयो। आदर्श रूप मा, तपाइँ पहिले एक पेशेवर को पर्यवेक्षण को तहत प्रक्रिया को प्रक्रिया ले जाना चाहिए। र यदि उहाँले तपाईंलाई हेरचाहको स्वतन्त्र अभ्यासको साथमा सान्त्वना दिनुहुन्छ भने, केवल आंशिक आत्म-उपचारमा जान आवश्यक छ। यो प्रदान गरिएको छ कि ड्रिल्सहरू जेलमा थप्न आवश्यक जल्स, क्यान्सल वा कैप्सूलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। याद गर्नुहोस् कि मौखिक प्रशासन अनियन्त्रित उपचारको साथ खतरनाक हुन सक्छ!
Turgor: यो के हो? छाला turgor कसरी जाँच गर्ने?
घरमा pores साँघुरो गर्न मास्क: प्रकृति को रहस्य - आफ्नो अनुहार लागि
रासायनिक छाती एक प्रक्रिया हो जुन युवायुवतीलाई जीवनमा फर्किन्छ।
जोनद्वारा अनुहारमा मुँहासे: उपस्थिति र उपचारका विशिष्टताहरूको कारण
शुक्राणु - एक विरोधी बुढापेन्ट एजेन्टबाट मास्क?
कति चाँडो एक चोट हटाउन
कसरी बच्चा गणना गर्न सिकाउन?
जब क्रस-कन्ट्री स्किइङ लागि जूता छनौट लागि के हेर्न?
"सुन माछा" - एक भारतीय लोक कथा। विश्व को कहानिहरु
फिल्म "Truffaldino बर्गामो": अभिनेताहरु। फिल्म को इतिहास
ताजिकिस्तान। गणतन्त्र शहर र आफ्नो सूची
को व्हाइटफिश के हो? तपाईं आनन्द कि माछा
नवजातिका लागि सुन्नु: डाक्टरहरूको समीक्षा
नाशपाती संग केक: एक सरल नुस्खा। पकाउने सुझाव
रूस, इर्कुत्स्क चिडियाघर petting। वर्णन, सुविधाहरू, जनावर, सञ्चालन र समीक्षा